သေဆုံးပြီးချိန်မှာတောင် တစ်ခြားသူတွေရဲ့ဘ၀ကို ကူညီကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်ကြားသူများ – Trend.com.mm
Posted on October 15, 2018 by Noel
တစ်ချို့သောသူတွေရဲ့သေဆုံးမှုက လူအများစုရဲ့ဘ၀တွေ၊အသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်တွေသေဆုံးတဲ့အခါ သူတို့ဘာကြောင့်သေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းက တစ်ခြားသူတွေအတွက်အချက်ပြမီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေက
သူတို့မသေဆုံးခင် ကလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ဖြစ်ခဲ့သလို သူတို့သေဆုံးပြီးချိန်မှာလည်း ပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့တာလဲ?
Rock Hudson ကြောင့် AIDS ရောဂါကို လူတွေပိုပြီးသတိထားလာကြတယ်
မင်းသား Rock Hudson ဟာ AIDS ရောဂါရှိနေကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရုတ်တရက်ဆိုသလို လူအများစုဟာ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာစုံစမ်းတာတွေ၊သတိပြုစရာတွေရှောင်ရန်၊ဆောင်ရန်တွေကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။သူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်း Elizabeth Taylor ဟာလည်း အဲဒီအချိန်ကစလို့ Elizabeth Taylor AIDS Foundation ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဘ၀တွေအများကြီးကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
Kate Spade နဲ့ Anthony Bourdain တို့ရဲ့ သေဆုံးမှုက မရှိတော့မှတန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းသိတဲ့သူတွေကို အသိတရားရစေခဲ့တယ်
၂၀၁၈ ဇွန်လ ၅ရက်နေ့တုန်းက Kate Spade ဟာ သူမကိုယ်သူမအဆုံးစီရင်ခဲ့ပြီး နောက်သုံးရက်အကြာမှာ Anthony Bourdain ဟာ ပြင်သစ်မှာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒါက လူတွေတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်
အချိန်လွန်မှအားပေးနှစ်သိမ့်တာမျိုးမလုပ်မိဖို့အသိပေးလိုက်သလိုပါပဲ။လေ့လာချက်အရ ဆယ်လီနှစ်ယောက်အဆုံးစီရင်မှုအပြီးမှာNational Suicide Prevention Lifeline ဟာ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာပြီး ကာကွယ်မှုတွေပိုပြီးတင်းကျပ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ယောက်ယောက်မှာ Suicide လုပ်ဖို့အတွေးဝင်နေရင် အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဌာနကိုအကြောင်းကြားလို့ရပါတယ်။
Jayne Mansfield ကြောင့်လူတွေဟာ ကားမတော်တဆမှုမဖြစ်ပွားအောင် ပိုပြီးသတိထားလာကြတယ်
နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်အလှဘုရင်မတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jayne Mansfield ဟာ ကားမတော်တဆမှုနဲ့သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကနေအပြန် ညလည်းအရမ်းမှောင်နေပြီးကားမောင်းသူရဲ့မျက်လုံးဟာလည်းေ၀၀ါးနေတာကြောင့်ထရပ်ကားလာနေတာကိုမမြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့ ကလေးသုံးယောက်၊ရှေ့နေ၊ခွေးလေးကောင်ပါဝင်တဲ့ကားဟာ မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးထရပ်ကားအောက်ကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။Mansfield ၊ကားမောင်းသူနဲ့ရှေ့နေက ချက်ချင်းသေဆုံးခဲ့ပြီး ကလေးတွေနဲ့ခွေးလေးတွေကတော့ ဒဏ်ရာအနည်းသာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစလို့
ကားလမ်းလုံခြုံရေးတွေက တင်းကျပ်ခဲ့ပြီးကားမတော်တဆမှုတွေလျော့ပါးအောင်ကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထရပ်ကားတွေရဲ့အောက်မှာ under-ride bars တွေတပ်ဆင်ဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေက ကားသေးလေးတွေအောက်ထဲဝင်လာတဲ့အခါ ရပ်တန့်ထားလို့ရပါတယ်။အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ “Mansfield bars” လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
Natasha Richardson ရဲ့ သေဆုံးမှုက ကိုယ့်အတွက်မလိုအပ်တော့တဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုတစ်ခြားသူတွေကိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသိကိုရစေခဲ့တယ်
၂၀၁၄ တုန်းကဆို တစ်နေ့မှာ လူ ၂၁ယောက်က ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလဲလှယ်ဖို့စောင့်ရင်းသေဆုံးကြရပါတယ်။အမေရိကန်လူမျိုး ၄၅ရာခိုင်နှုန်းကသာ သူတို့သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အခါကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေလှူဒါန်းဖို့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နာမည်ကျော်မင်းသမီး Natasha Richardson ဟာလည်းတကယ့်ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက စကိတ်စီးရင်းသူမရဲ့ ခေါင်းကိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုတွေက ဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပြီး သူမ မသေဆုံးခင်မှာနောက်ဆုံးဆန္ဒအဖြစ် သူမရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့နှလုံး၊အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်ဟာ တစ်ခြားသူသုံးယောက်အသက်ရှင်အောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Rebecca Schaeffer ရဲ့ သေဆုံးမှုကြောင့် နောက်ယောင်ခံလိုက်တာဟာပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့ဥပေဒရှိလာခဲ့တယ်
ကိုယ့်အနောက်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်က နေ့တိုင်းလိုက်နေတာဟာ သာမန်လို့ထင်နေလို့မရပါဘူး။မင်းသမီး Rebecca Schaeffer ဟာ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခံရပြီး အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့သေဆုံးမှုကြောင့် နောက်ယောင်ခံလိုက်တာကို ပြစ်မှုလို့သတ်မှတ်ပြီး အဲ့ဒီလူတွေကို အပြစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဆို ဒီလိုနောက်ယောင်ခံလိုက်တာက ပိုပြီးအပြစ်ကြီးပါတယ်။နောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်တာကြောင့်အခုလို ဥပဒေသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဟာ အနုပညာရှင်တွေအတွက်ရော၊သာမန်လူတွေအတွက်ပါ အသက်ရှုနည်းနည်းချောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက မင်းသမီး Rebecca Schaeffer ကြောင့်ပါပဲ။
တဈခြို့သောသူတှရေဲ့သဆေုံးမှုက လူအမြားစုရဲ့ဘဝတှေ၊အသကျတှကေိုကယျတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ နာမညျကြျောကွားတဲ့အနုပညာရှငျတှသေဆေုံးတဲ့အခါ သူတို့ဘာကွောငျ့သတေယျဆိုတဲ့အကွောငျးက တဈခွားသူတှအေတှကျအခကျြပွမီးတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။အနုပညာရှငျတှကေ
သူတို့မသဆေုံးခငျ ကလညျးပရိသတျတှအေတှကျဖွဈခဲ့သလို သူတို့သဆေုံးပွီးခြိနျမှာလညျး ပရိသတျတှအေတှကျအကြိုးပွုနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ဘယျလိုအကြိုးပွုနိုငျခဲ့တာလဲ?
Rock Hudson ကွောငျ့ AIDS ရောဂါကို လူတှပေိုပွီးသတိထားလာကွတယျ
မငျးသား Rock Hudson ဟာ AIDS ရောဂါရှိနကွေောငျးပရိသတျတှကေိုအသိပေးခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ရုတျတရကျဆိုသလို လူအမြားစုဟာ ဒီရောဂါနဲ့ပတျသကျလို့လလေ့ာစုံစမျးတာတှေ၊သတိပွုစရာတှရှေောငျရနျ၊ဆောငျရနျတှကေို လလေ့ာခဲ့ကွပါတယျတဲ့။သူနဲ့ရငျးနှီးခဲ့တဲ့သူငယျခငျြး Elizabeth Taylor ဟာလညျး အဲဒီအခြိနျကစလို့ Elizabeth Taylor AIDS Foundation ကိုဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီးဘဝတှအေမြားကွီးကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယျ။
Kate Spade နဲ့ Anthony Bourdain တို့ရဲ့ သဆေုံးမှုက မရှိတော့မှတနျဖိုးထားရကောငျးမှနျးသိတဲ့သူတှကေို အသိတရားရစခေဲ့တယျ
၂၀၁၈ ဇှနျလ ၅ရကျနတေု့နျးက Kate Spade ဟာ သူမကိုယျသူမအဆုံးစီရငျခဲ့ပွီး နောကျသုံးရကျအကွာမှာ Anthony Bourdain ဟာ ပွငျသဈမှာသူ့ကိုယျသူအဆုံးစီရငျခဲ့ပါတယျ။သူတို့ကိုခဈြတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျဝမျးနညျးစရာဖွဈခဲ့ပွီး ဒါက လူတှတေဈယောကျကိုတဈယောကျ
အခြိနျလှနျမှအားပေးနှဈသိမျ့တာမြိုးမလုပျမိဖို့အသိပေးလိုကျသလိုပါပဲ။လလေ့ာခကျြအရ ဆယျလီနှဈယောကျအဆုံးစီရငျမှုအပွီးမှာNational Suicide Prevention Lifeline ဟာ ၆၅ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၁၁၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိတိုးတကျလာပွီး ကာကှယျမှုတှပေိုပွီးတငျးကပျြလာခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။တဈယောကျယောကျမှာ Suicide လုပျဖို့အတှေးဝငျနရေငျ အဲ့ဒီကာကှယျရေးဌာနကိုအကွောငျးကွားလို့ရပါတယျ။
Jayne Mansfield ကွောငျ့လူတှဟော ကားမတျောတဆမှုမဖွဈပှားအောငျ ပိုပွီးသတိထားလာကွတယျ
နာမညျကြျောသရုပျဆောငျမျောဒယျအလှဘုရငျမတဈယောကျဖွဈခဲ့တဲ့ Jayne Mansfield ဟာ ကားမတျောတဆမှုနဲ့သဆေုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဖြျောဖွပှေဲတဈခုကနအေပွနျ ညလညျးအရမျးမှောငျနပွေီးကားမောငျးသူရဲ့မကျြလုံးဟာလညျးဝဝေါးနတောကွောငျ့ထရပျကားလာနတောကိုမမွငျခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့ ကလေးသုံးယောကျ၊ရှနေ့ေ၊ခှေးလေးကောငျပါဝငျတဲ့ကားဟာ မတျောတဆမှုဖွဈခဲ့ပွီးထရပျကားအောကျကိုဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။Mansfield ၊ကားမောငျးသူနဲ့ရှနေ့ကေ ခကျြခငျြးသဆေုံးခဲ့ပွီး ကလေးတှနေဲ့ခှေးလေးတှကေတော့ ဒဏျရာအနညျးသာရရှိခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီကစလို့
ကားလမျးလုံခွုံရေးတှကေ တငျးကပျြခဲ့ပွီးကားမတျောတဆမှုတှလြေော့ပါးအောငျကာကှယျခဲ့ကွတယျလို့သိရပါတယျ။ထရပျကားတှရေဲ့အောကျမှာ under-ride bars တှတေပျဆငျဖို့ကွညောခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒါတှကေ ကားသေးလေးတှအေောကျထဲဝငျလာတဲ့အခါ ရပျတနျ့ထားလို့ရပါတယျ။အပွောငျးအလဲတဈခုကိုလုပျပေးခဲ့တဲ့အမြိုးသမီးကိုဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ “Mansfield bars” လို့လညျးချေါကွပါတယျ။
Natasha Richardson ရဲ့ သဆေုံးမှုက ကိုယျ့အတှကျမလိုအပျတော့တဲ့ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှကေိုတဈခွားသူတှကေိုပေးလို့ရတယျဆိုတဲ့အသိကိုရစခေဲ့တယျ
၂၀၁၄ တုနျးကဆို တဈနမှေ့ာ လူ ၂၁ယောကျက ကိုယျတှငျးအင်ျဂါလဲလှယျဖို့စောငျ့ရငျးသဆေုံးကွရပါတယျ။အမရေိကနျလူမြိုး ၄၅ရာခိုငျနှုနျးကသာ သူတို့သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့အခါကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှလှေူဒါနျးဖို့စာရှကျစာတမျးနဲ့ပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။နာမညျကြျောမငျးသမီး Natasha Richardson ဟာလညျးတကယျ့ကိုအံ့သွဖို့ကောငျးတဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျပါ။၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက စကိတျစီးရငျးသူမရဲ့ ခေါငျးကိုထိခိုကျခဲ့ပါတယျ။ဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပွီး သူမမသဆေုံးခငျမှာနောကျဆုံးဆန်ဒအဖွဈ သူမရဲ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှကေိုလှူဒါနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့နှလုံး၊အသညျးနဲ့ကြောကျကပျဟာ တဈခွားသူသုံးယောကျအသကျရှငျအောငျကယျတငျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Rebecca Schaeffer ရဲ့ သဆေုံးမှုကွောငျ့ နောကျယောငျခံလိုကျတာဟာပွဈမှုမွောကျတယျလို့ဥပဒေရှိလာခဲ့တယျ
ကိုယျ့အနောကျကနေ တဈယောကျယောကျက နတေို့ငျးလိုကျနတောဟာ သာမနျလို့ထငျနလေို့မရပါဘူး။မငျးသမီး Rebecca Schaeffer ဟာ နောကျယောငျခံလိုကျခံရပွီး အသတျခံခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့သဆေုံးမှုကွောငျ့ နောကျယောငျခံလိုကျတာကို ပွဈမှုလို့သတျမှတျပွီး အဲ့ဒီလူတှကေို အပွဈပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ကယျလီဖိုးနီးယားမှာဆို ဒီလိုနောကျယောငျခံလိုကျတာက ပိုပွီးအပွဈကွီးပါတယျ။နောကျယောငျခံလိုကျပွီးပွဈမှုကြူးလှနျတတျတာကွောငျ့အခုလို ဥပဒသေတျမှတျပေးလိုကျတာဟာ အနုပညာရှငျတှအေတှကျရော၊သာမနျလူတှအေတှကျပါ အသကျရှုနညျးနညျးခြောငျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒါက မငျးသမီး Rebecca Schaeffer ကွောငျ့ပါပဲ။